Incest အလုံးစုံသော် - Myanmar Professor X - Page 1
by Night_Krawler - 02-16-2020, 12:41 AM
Creator of Own Planet
ဦးရဲနောင်တစ်ယောက် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ထားမေနှင့် အသတ် ၂၃နှစ်အရွယ်သမီး ဖြစ်သူတို့ ရန်ကုန်သို့ အလုပ်ကိစ္စဖြင့် ခရီးထွက်သွားလေရာ အိမ်ဝန်းကြီးထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ ပျင်းရိစွာလမ်းရှောက်နေရင်း တစ်ဖတ်ခြံထဲသို့ အမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်ရာ တောင်ဘက်ခြံမှ ရွှေအိသော် ရေချိုးနေသည်ကို မြင်လိုက်၍ မြင်သာတဲ့နေရာကနေကြည့်ရန် မိမိ၏အိမ်အပေါ်ထပ်သို့ တက်၍ ပြတင်းပေါက်ကနေချောင်းကြည့်ဖီးခံနေလေ၏။ ထိုသို့နှင့် ချောင်းကြည့်လိုက်ဂွင်းထုလိုက်နဲ့ ၁၅ရက်လောက်အကြာမှာတော့ ရန်ကုန်မှ သမီးဖြစ်သူ ရူပကျော်တစ်ယောက်ပြန်လာလေသည် (ဖေဖေ ဖေဖေ အပြင်မှာအဖေခေါ်သံကြားသောကြောင့် ဦးရဲနောင်တစ်ယောက် တံခါးဖွင့်ပေးလေရာ သမီးပါလား သမီးအမေရော အမေက အလုပ်ကိစ္စမပြတ်သေးလို့ တစ်ပတ်လောက်ကြာဦးမယ်တဲ့ ဒါနဲ့ သမီးလည်း ရန်ကုန်မှာနေရတာပျင်းလို့ အမေကိုပြောပီး အရင်ပြန်လာနှင့်တာပါ။ ဟုတ်ပါပြီ သမီးလည်းခရီးပန်းလာတာဆိုတော့ ရေမိုးချိုးလိုက် အဖေလည်း တစ်ယောက်ထဲဆိုတော့အိမ်မှာ ဘာမှမရှိဘူး ပီးမှသမီးနဲ့အပြင်မှာသွားစားမယ်လေ။ နေပါစေ အဖေ သမီးက တစ်ခါထဲ လမ်းထိပ်က ဆိုင်က စားလာတာ။ အော် ဒါဆို သမီးနားနားနေနေ နေခဲ့ပေါ့၊၊ အဖေမစားသေးလို့သွားစားလိုက်ဦးမယ်။ ဟုတ်၊၊ အဖေသွာပြီနော် သမီး။ ဟုတ်ဖေ ဒါနဲ့အဖေနဲနဲ ကြာမယ်နော် ဟုတ်အဖေ ရူပကျော် တစ်ယောက်လည်း ခရီးပန်းလာတာနဲ့ မိမိခန္ဓာကိုယ်က အဝတ်အစားတောင်မလျှော်နိုင်ပဲ ရေချိုးခန်း တန်းမှာတင်ပီး ရေချိုးပီး အပြင် ဧည့်ခန်း ဆိုဖာ မှာပဲလှဲရင်း အိပ်ပျော်သွားလေတယ် ညနေ ၄ နာရီလောက် ဦးရဲနောင် အပြင်မှ ပြန်အလာအိမ်တံခါးစေ့ထား၍ သမီးဖြစ်သူကို အော်ခေါ်လေ၏၊၊ သမီး သမီးရေ သမီး ရူပါကျော် ဒီကောင်မလေး ဘာများလုပ်နေပါလိမ့် အဖေဒီလောက် ခေါ်တာတောင် မကြားဘူး၊ ဒါနဲ့ တံခါးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်တွန်းဖွင့် ဝင်လာတဲ့အချိန် ဧည့်ခန်းမှာ တွေ့လိုက်ရတဲ့ သမီးဖြစ်သူရဲ့ အဖြစ်ကြောင့် အသတ်ရူရပ်မတက် ကြောင်အန်းအန်းဖြစ်သွားလေ၏ ထမိန်ကို ပီပီပြင်ပြင် မဝတ်တတ် အမြဲတမ်း ဘောင်ဘီနဲ့သာ နေတတ်တဲ့ သမီးလေးက ခုတော့ ဧည့်ခန်း ထမိန်လေးနဲ့အိပ်နေတော့ ထမိန်က ပေါင်လည်ထိ ပြည်ကျလေတော့ ဝင်းဝါ နုဖတ်နေတဲ့ ပေါင်ခြေနဲ့
ရေချိုးပီး ခရီးပန်းလာတာကြောင့် ပင်တီတောင် မဝတ်နိုင်ပဲ အိပ်တော့ စောက်ဖုတ်အမွှေးမဲမဲ ကြားကမြင်နေရတဲ့ အသားဖွေးဖွေးအရောင်လေးတွေနဲ့
အပြင်ကို ဖုထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ် နှစ်ခမ်းသားလေးတွေက ဦးရဲနောင် ကာမကို ရိုက်ရိုက်နိုးသလိုဖြစ်လာကာ ပုဆိုးကြားမှ လီးကလဲ စောက်ဖုတ်မြင်ရင် မင်းမတောင်နဲ့လို့ ဆုံးမ မရသလိုငေါ့ထွက်လာလေ၏။ ဦးရဲနောင် စိတ်မှာလဲ ငါ့သမီး အရင်းခေါက်ခေါက်ပါလား မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဟာကွာ မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပီး စိတ်ကိုပြန်ထိန်းကာ လာရာတံခါးသို့ ပြန်သွားပီး သမီးလို့ ပြန်ခေါ်လေတယ်။ သမီး သမီးရေဆိုကာမှ သမီးဖြစ်သူ ရူပါကျော်လည်းနိုးလာပီး အိပ်ခြင်မူးတူးဖြင့် အဖေပြန်ရောက်ပီလား။ သမီးလည်းခရီးပန်းလာတာနဲ့ ဧည့်ခန်းမှ ခဏလှဲရင်း အိပ်ပျော်သွားတာ အဖေလာမှပဲနိုးတာ။ ကဲ ဟုတိပါပြီ ရော့ သမီးစားဖို့ ညစာ။ ရေသွားချိုးပြီး စားပီးမှအိပ်၊ သမီး ရေမချိုးတော့ ချိုးပြီးပြီ။ ဒါဆိုလည်းမျက်နာသွားသစ်ပီး ညစာ စားပီး အခန်းထဲမှာသွားအိပ် ဟုတ် ဖေ ည ၈နာရီလောက်မှာ
ဦးရဲနောင်တစ်ယောက် ညနေက သမီးဖြစ်သူ စောက်ဖုတ် နုနု လေးကို မြင်ရောင်ပီး အိပ်မပျော်ဖြစ်နေ။ထိုသိုဖြင့် သမီးဖြစ်သူအခန်း သို့အသာကပ်သွားပီး
ညနေကလိုများ မြင်ရမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ သွာလေ၏။ ဒါပေမဲ့ သမီးဖြစ်သူက အခန်းတံခါးပိတ်ထား၍ မိမိနေရာသို့ ပြန်လာကာ မထူးပါကွာဆိုပီးသမီး ကို
မှန်းပီး ဂွင်းထုကာအိပ်ပျော်သွားလေ၏ မနက် ၇ နာရီလောက်မှာ ဦးရဲနောင်တစ်ယောက်စောစီးစွာထ၍ ရေချိုးခန်းသို့ မျက်နာသစ်ရန်ရေချိုးခန်းအရောက် သမီးဖြစ်သူ မနေ့က မလျှော်ပဲတင်ထားတဲ့ အဝတ်တွေက ပင်တီပန်းနုရောင်လေးကို ဘာရယ်မဟုတ် ယူလိုက်ခါကြည့်ပီး နမ်းလိုက်ရာ သမီးဖြစ်သူ ရန်ကုန်မှ ခရီးရှည်ဝတ်လာတဲ့ အောက်ခံလေးဆိုတော့ သမီး စောက်ဖုတ်အနံ့ က နံသထက်ကိုနံနေတယ်။ သိုပေမဲ့ ဦးရဲနောင် ကာမစိတ်ကြောင့် မွှေးလို့နေတယ်။ ထိုစဉ်မှာဦးရဲနောင် စဉ်းစားမိသွားတယ် သမီးကလည်း ခရီးပန်းလာတာဆိုတော့ တော်တော်နဲ့ထမှာမဟုတ်ဘူး။ ဟိုဘက်ခြံက ရွှေအိသော်ကလည်း ရေချိုးချိန်ဆိုတော့ ချောင်းကြည့်ပီး သမီးဖြစ်သူ ပင်တီလေးကို ဂွင်းတိုက်မယ်အတွေး ပင်တီလေးကိုယူကာ အိမ်အပေါ်ထပ်သို့ တက်ကာ ရွှေအိသော်ရေချိုးတာ ကြည့်ရင်း သမီးဖြစ်သူပင်တီကိုနမ်း စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ဂွင်ထုနေ၏။ ခဏအကြာမှာ သမီးဖြစ်သူ ရူပါကျော်နိုးလာကာ မျက်နာသစ်ရန် ရေချိုးခန်းသွားတော့ မနေ့က သူမ တင်ခဲ့တဲ့ အဝတ်တွေလျှော်မလို့ကြည့်လိုက်တော့ ပင်တီတစ်ထည်ကပျောက်နေတယ်။ ဒါနဲ့ အိမ်မှာလည်းဖေဖေနဲ့သူပဲရှိတာ ဘယ်လိုပျောက်နေ ပါလိမ့် စဉ်းစားကာ အပြင်သို့ထွက်ခါ ဖေဖေ လို့ခေါ်တော့လည်းဖေဖေကမထူး။ ဘယ်သွားပါလိမ့်ပေါ့ ဒါနဲ့ အိမ်အပေါ်ထပ်ကာ နောက်ဆုံးလှေခါး နှစ်ဆင့်အရောက် သူမ အံသြသွားလေတယ်။ အဖေဖြစ်သူက သူမပင်တီကိုနမ်းပီး မျက်လုံးကလည်းတစ်ဘက်ခြံကိုကြည့်ကာ လက်ကလည်း အောက်ခြပီး လှုပ်နေလေတော့ သမီးဖြစ်သူ ဖခင်လက်သွားရာအောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ လည်ချောင်းမှတံတွေး ခွိခနဲမြည်သွားလေတယ်။ ၈လက်မလောက်ရှည်ပီး ဓာတ်မီး ခေါင်းလောက်ရှိတဲ့ လီးကို မြင်ကာ ခန္ဓာကိုယ်တွေ ဆက်ဆက်တုန်ကာ စပတ်မှလည်း ယာယံသလိုခံစားရ၍ မသင့်ပါဘူးဆိုပြီး အောက်ပြန်ဆင်းခဲ့တယ်။ အောက်ထပ်ရောက်တော့ ဖေဖေ က ဘာကြောင့် ငါ့ပင်တီကိုရှူနေတာလည်း သူစဉ်းစားနေ၏။ ပီးတော့ ဟိုဘက်အိမ်ကိုလည်း မျက်တောင်မခက်ကြည့်နေတာ
ဘာလိုလည်းဆိုပီး အိမ်အပြင်ထွက်ခါ အဝေးကကြည့် လိုက်တော့ ရွှေအိသော် ရေချိုးနေတာကို ချောင်းပီး သူမ ပင်တီကိုနမ်းကာ အာသာဖြေနေတယ်ဆိုတာ
သဘောပေါက်သွားလေတယ်။ အိမ်ထဲပြန်ဝင်ပီး ထိုင်ခုန်မှာထိုင်ကာ အဖေဖြစ်သူရဲ့ လီးကြီး ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန် မြင်ရောင်ကြည့်လိုက် မသင့်ပါဘူးဆိုပြီး မြင်ကွင်းကို ဖျောက်လိုက်နဲ့ မျောက် အုန်းသီးရသလို ဂဏာမငြိမ် ဖြစ်နေတယ်။ ဦးရဲနောင်လည်း သမီးမနိုးသေးဘူးပေါ့ အေးဆေး ပင်တီကိုနေရာအတိုင်း
ပြန်ထားမယ်စိတ်ကူးနဲ့ အောက်ထပ်သို့ဆင်အလာ သူထင်ထားသလိုဖြစ်မလာ သမီးဖြစ်သူက လှေကားနဲ့ မျက်နာချင်းဆိုင် ထိုင်ခုန်မှာထိုင်နေတော့ ဦရဲနောင်လည်း ပင်တီကို ကမန်းကတန်း ခါးကြားသို့လိပ်ခါ ဆင်းခဲ့၏။ ဪ သမီးနိုးတာကြာပါ့လား။ မကြာသေးပါဘူး။ ခုလေးမှနိုးတာပါဖေ ဦးရဲနောင်တစ်ယောက် သမီး မျက်နာသစ်ပီးပြီလားမသိ မသစ်ပါစေနဲ့လို့စိတ်ထဲကဆုတောင်နေပေမဲ့ သမီးဖြစ်သူက အားလုံးသိပြီးပြီ။ ဦးရဲနောင်ပင်တီးဘယ်လိုပြန်ထားရမလည်း ဆိုတဲ့စိတ်က မျက်နာမှာနီရမ်းလို့နေတယ်။ သမီး အဖေမျက်နာမသစ်ရသေးလို့ သွားသစ်အုန်းမယ်နော်။ သမီးဖြစ်သူကလည်းပါးနပ်တာပေါ့ အဖေနိုးနေတာ ကြာပီမို့လား ဟုတ်တယ် အပေါ်ထပ်မှာ စရင်းလေးတွေ အရေးကြီးနေလို့ အရင်စုဆောင်းနေလို့လေ။
ဟုတ်ဖေ အာ့ဆိုလည်းသွားသစ်လေဖေ သမီးရော သစ်ပီပြီလားမသစ်ရသေးပါဘူး။ ဦးရဲနောင်လည်းခုမှ လုံးကြီးကျသွားကာ ရေချိုးခန်းသို့ သွားလေ၏။
ထိုသို့ဖြင့် ညရောက်ကာ သားဖနှစ်ယောက် ကိုယ်အိပ်ခန်းဝင်ကာသမီးဖြစ်သူကလည်းအဖေဖြစ်သူ၏ လီးကိုစဉ်းစားမြင်ရောင်ကာ အရေရွှဲနေတဲ့ မိမိစပတ် အသွားအထက်က အစိလေးကိုခြေကာ မိမိအဖေအရင်းနဲ့စိတ်လိုး လိုးကာ အာသာဖြေသလို ဖခင်ဖြစ်သူကလည်း သမီးရဲ့ဝင်းဝါနုဥဖြူဖတ်ပေါင်တန်နှင့် စောက်မွှေးနုနုထက်က စောက်စိလေးမြင်ကာ ဂွင်းထုရင်း သားဖနှစ်ယောက်သမီးကအဖေကိုမှန်းအဖေကသမီးကိုမှန်းကာ တစ်ညတာ ကုန်ဆုံးသွားလေ၏။
မနက်5နာရီလောက်မှာ သမီးဖြစ်သူ ရူပါကျော်က နိုးနှင့်ပီး အဖေဖြစ်ဦးရဲနောင် စားရန် နံနက်စာ ပြင်ဆင် အလုပ်ရှုပ်နေ၏။ ( ချောက် ချ လပ်) ဖေ အစောကြီးရှိသေးနိုးလာတယ်။ အင်း အဖေလည်း နိုးပြီး ပြန်အိပ်မပျော်လို့။ ဒါဆို ဖေ မျက်နာသစ်ပီးရင် နံနက်စာ စားမယ်လေ။ အေး အေး သမီး
ဦးရဲနောင် မျက်နာသစ်ပီး သားဖနှစ်ယောက် နံနက်စာစားရင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ခိုးခိုးကြည့်လို့ပေါ့ ဦးရဲနောင်ကလည်း သမီးဖြစ်သူ၏
ညဝတ်အင်္ကျီမှာ ဘော်လီ ဝတ်မထားတော့ နိမ့်တုန်မြင့်တုန်နိုးသီးကို ကြည့်လိုက်မျက်နာချင်းဆိုင်မိရင် လွှဲသွားလိုက် ဖေစား လေ ဘာလုပ်နေတာလဲ? ဪ အေးပါသမီး ဖေ ဘာမှမကြည့်ပါဘူး တုန်တုန်ရင်ရင်ပြန်ဖြေလေတော့ သမီးကအကဲခက်မိပီး ရှက်သွားမှာစိုး၍ ဟုတ်ဖေလို့ တစ်လုံးထဲသာပြော၍အတူတကွ စားကြလေ၏။ ဦးရဲနောင်သမီးရဲ့ နို့ ဆူဆူ အမွှာကိုကြည့်ပီ လီးကလဲ အောက်ကတောင် ဘောင်းဘီက ဝတ်မထားတော့ ငေါ့ထွက်နေတာပေါ့ လီးကအတော်နဲ့ငြိမ်မကျဖြစ်နေ သမီးရူပါကျော်ကလည်း ပန်ကန်ဆေးအပီး ဖေ ထတော့လေ သမီးဒီမှာသန့်ရှင်းရေးလုပ်အုန်းမယ်။ အေးပါ အေး သမီး ဦးရဲနောင်လဲ မြင်လဲမတက်နိုင်တော့ဘူး အရဲတင်းပီး မျက်စိလေးကလယ်ကလယ်နဲ့ ဧည့်ခန်းသို့ထသွားလေ၏။ သမီးဖြစ်သူရူပါကျော်ကလည်း
ဖခင် လီး ပုဆိုးမှ ငေါ့ထွက်နေတာ မမြင်ချင်ရောင်ဆောင်ပေမဲ့ မိမိ၏စပတ်လေးမှာတော့ အရည်တွေတစ်စိုစိုနဲ့ပေါ့။ အားလုံးအလုပ်တွေပီးတော့ ရူပါကျော် ဖအေဖြစ်သူနား သွားထိုင်ကာ ဖေ ဘာကားကြည့်မလို့လဲ ဖေလဲပျင်းလို့။ သိုင်းကားကြည့်မလို့ပါ သမီးလဲကြည့်မယ်ဖေ သမီးက ဘယ်မှမသွားဘူးလား သွားစရာမရှိပါဘူးဖေ။ အင်းဒါဆိုလဲကြည့်ပေါ့ ဆိုပီး ခွေစက်ကိုဖွင့်ကာ သိုင်းကား သားဖနှစ်ယောက်ကြည်နေလေ၏။ အစပိုင်းကတော့ ကား ရုပ်ညမ်းတာတွေမပါပေမယ့် နောက်အခန်းတွေမှာ ကစ်ပေးတာတို့ နို့ကိုင်တာတွေပါလာတော့ ဦးရဲနောင်က ကျော်တော့သမီးဖြစ်သူက
မကျော်ပါနဲ့ဖေရယ် သားဖတွေပဲ ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။ ဗဟုသုတပေါ့ အင်းပါသမီး နောက်ပိုင်းတော့ ရှောင်လင်ဘုန်းကြီးနဲ့ ကောင်မလေးက လိုးကြခန်း ရောက်လာတာပေါ့။
ဦးရဲနောင်လီးကအစွမ်းကုန်တောင်နေပီ သမီးဖြစ်သူကလဲ စပတ်က ဖောင်းကြွကာယားယံလာတယ် သမီး ပြောလေဖေ အဖေ့နားတိုးခဲ့ပါ ဟုတ်ဖေ သမီးကိုဖေပြောမယ်နော်၊ ဟုတ် ဖေလေ သမီး အမေ နဲ့ ခုဆိုရက်၂၀လောက်ခွဲနေရတော့ အဖေလေ လိင်ဆက်ဆံချင်မိတယ်။ ခု ဖေ့စိတ်ဖေသိလို့ ကျော်တာကို သမီးက မကျော်ခိုင်းတော့ ခု ဖေ့ ဟာက ထနေပီ ဖေလုပ်ချင်နေမိတယ်။ ဒီမှာကြည့်ပါ့လားသမီးဆိုပီး ပုဆိုးချွတ်ပြလိုက်တော့ အင်အားကြီး လီး တစ်ဆက်ဆက်နဲ့ အထိမ်းမရှိ ထောင်တက်နေတယ်။ ဦးရဲနောင်တစ်ယောက် ကိုယ့်သမီးအရင်းခေါက်ခေါက် ကို ဒီစကားတွေဘယ်လိုထွက်သွားတယ်မသိ။ လွန်သွားခဲ့ပီ သမီးဖြစ်သူလေးကလည်း ဖေလီးကိုကြည့်ကာ ငြိမ်သတ်နေချိန် ဖအေဖြစ်သူက သမီးလက်ကိုယူကာ သူလီးပေါ်သို့တင်ပေးလိုက်လေ၏။
သမီးဖြစ်သူကတော့ ဘာစကားမှမပြောနိုင်မှင်သတ်နေလေ၏။ ဦးရဲနောင်သမီးစကားပြန်မပြောတာကိုအခွင့်ယူကာ သမီးလေးရူပါကျော်ရဲ့ နုတ်ခမ်းမွှေး နုနုပါးပါးလေးအောက်က နှတ်ခမ်းနုပါးအိစက်သွယ်လျသော အပေါ်နှတ်ခမ်းလွှာ လေးကို သူ၏နုတ်ခမ်းဖြင့် အငမ်းမရ ကစ်ပေးရင်း သမီးအင်္ကျီကို တစ်ဖက်ကလက် ချွတ်ယူပီး ဘော်လီ အပြာရောင်လေးကိုပါ တစ်ပါသီးထဲ ချွတ်ကာ ပေါ်လာတဲ့ လက်သီးဆုတ် နို့အုံအထက် က ပြေပစ်ချောမွေ့ နီမြန်း သောနို့သီးလေးကို ပြောင်းစို့တော့ သမီးဖြစ်သူ ရူပါကျော်တစ်ယောက် တွန့်ခါတွန့်ကာလက်မှလဲ ဖခင်ကျောကုတ်ဆွဲ အင်း အင်း အိုး ပါးစပ်ကလဲ ညင်းနေလေ၏။ သမီးအရင်းဆိုတော့ ဦးရဲနောင်ကာမက ခေါင်ထိပ်သို့ရောက်သကဲ့ ပြွတ်ပြွတ်ပလွတ်ဆိုတဲ့နို့စို့နေတဲ့အသံကလည်းကျယ်လိုပေါ့ ရူပါကျော် အဖေ၏နို့စို့မူကြောင့် ပင်တီမှာဆို ရေစိုသိအလား စိုရွဲနေလေ၏ လက်ကလည်း အဖေဖြစ်သူလီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုတ်ထားလေ၏။ ကောင်း ကောင်း အရမ်းကောင်းတယ်သမီးရယ် အားအင်းဖေ ဖေ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလည်း သမီး သမီး အင်းသမီးမနေတတ်တော့ဘူးဖေ သမီးဖေလီးကို ဘာလိုဆုပ်ထားတာလဲ ကစားပေးပါသမီးလေးရယ်။ သမီးမသိဘူး ဖေ သမီးမလုပ်တတ်ဘူး ဖေ သမီးခံစားနေရတာပဲ သိတယ်ဖေ လို့သမီး အရင်းခေါက်ကြီးပြောတော့ နို့စို့ရင်း သမီးပင်ကြားလက်လျိုကာ စောက်စိ ပဲစိလောက်လေး ကို လက်မနဲ့လက်ညိုးညက်ပီးကိုင်တွယ်နေလေ၏၊ သမီးအဲ့လို သမီးစပတ်လေးကိုဖေ ကစားသလို
သမီးလက်ကလေးနဲ့ဟိုပွတ်ဒီပွတ်လုပ်လိုက်လေလို့ ဖအေကပြောတော့ လက်ကလေး လှုပ်ရှားလာပြီး ဦးရဲနောင် အတွက် ကောင်းမှကောင်းဖြစ်နေတယ်။ သမီးဖေမရတော့ဘူးကွာ အခန်းထဲသွားစို့ သမီးချစ်လေးရောဟင် အင်းအားညင်းညူရင်း ဖေလိုပါပဲ ဒါဆိုသွားစို့နော်၊ ဟုတ် ဖေ့အခန်းသွားမယ်နော်သမီး သမီးခန်းပဲသွားရအောင်ဖေ သမီးသဘောပါဆိုပြီး။ အောက်ခံပင်တီသာကျန်တော့တဲ့သမီး ကိုယ်လုံးလေးကို ပွေ့ချီကာ ခေါ်သွားလေ၏။ အခန်းထဲရောက်တော့ သမီးကို ကုတင်ပေါ်တင်ကာ သမီး ရှင် ဖေ သမီးခံချင်နေပီလား။ ဟုတ်ဖေ ခံတာဘာတော့မသိဘူး သမီး စပတ်ထဲ ယားယံပြီး တစ်ခုခုလိုနေသလိုပဲ ပီးတော့ ခုနက ဖေဖေလက်နဲ့ သမီးစပတ်ကိုကိုင်တော့ သမီးလေ ကောင်းကင်ယံထက်က တိမ်လွှာကြားမှာ ပလပ်လေးမျှောနေသလိုခံစားရတယ်ဖေ ဒီထက်ကောင်းအောင် ချစ်သမီးလေးကို ချစ်ဖေဖေလုပ်ပေးမှာပေါ့။ ဟုတ် ဖေ ဒါဆိုလဲလုပ်ပေးတော့ဖေရယ် သမီး ပင်တီလေးချွတ်လိုက်လေ၊ ဟုတ်ဖေ
ရူပါကျော်ဖေခိုင်းသည့်တိုင်း ပင်တီလေးချွတ်ပီး ပီးပြီဖေ ပေါင်လေးကားလိုက်သမီး ဟုတ်ဖေ ရိုသားဆက်ဆံဖူးသည် မဟုတ်သည့် သမီးအပျိုစစ်စစ် စပတ်လေးကို ဦးရဲနောင်တစ်ယောက် သူလီးကိုကိုင်ကာ နှင်းဆီအထက်အလွှာလေးလားဟနေတဲ့ သမီးစပတ်နှတ်ခမ်းသားမှာတေ့ပီး ချော့မထိုးပဲ
တစ်စွတ်ထိုးဆောင့်ထိုးလိုက်တော့ အလိုးမခံဘူးသေးတဲ့သမီးစပတ်ကလေး အပျိုအမှေးတွေရောဘာတွေရော အကုန်ပွင့်ထွက်ပီး သွေးလေးတွေ မျက်ရည်အလားကျလာပီး သမီးဖြစ်သူမှာမျက်ရည်ကျပီး အမလေးအမေ ဖေ ဘယ်လုပ်လိုက်တာလည်း နာလိုက်တာဖေရယ် ဖေပြောတော့ ကောင်းတယ်ဆို အား အင်း နာတယ်ဖေ အားဖေ အမလေးဖေရေ နာတယ် ခဏလေးပါသမီးရယ် ကောင်းလာတော့မှာပါ သည်းခံပါအုံးနောသမီးဆိုပီး ဆောင့်ချတ်တွေ ပုံပန်လေးနဲ့ ဆောင့်နေလေ၏။ သမီးဖြစ်သူရူပါကျော်လည်း အနာဘက်ကနေ အကောင်းဘက်ရောက်ပီး ကောင်းလာတဲ့ ငြီးသံလေးတွေထွက်လာတယ် အားးးး ဖေ ကောင်းးးး ကောင်းလိုက်တာဖေရယ် ဆောင့်ပါ ဖေ သမီးခံနိုင်ပြီ။ အားးးအင်းးးးအိုးးးဖေ ဖေဖေလေး လိုးပါ အား ဆောင့်လဲစောင့်သမီးကို စကားလဲပြော သမီးနာမှာစိုးလို ဖေ တစ်ဝက် ပဲထည့်ဆောင့်နေတာပါအဆုံးထိထည့်လိုက်မယ်နော်သမီး၊ ထည့်လိုက်ဖေ မြန်မြန်လေးလုပ်ပါလို့ သမီးကလည်းပြောလိုက်ကော
အားဆောင့်လိုးတော့တာပဲ အားးးးအိုးးးးးအင်းးးးဖေ ချစ်ဖေကြီး အရမ်းကောင်းတယ် သမီးးးပြီးခြင်ပီးဖေ ဖေလဲပြီးတော့မှာသမီးးးးးး အားးးး သမီးးး ဆိုပြီး ဦးရဲနောင်စိတ်ရှိတိုင်းဆောင့်လိုးနေလေ၏။ အားးဖေးးးးအာားးးးးဖေအအဖေ အားးးးသမီး ဖေ ဖေ ပြီးတော့မယ်ဆိုပီး အသကုန်ဆောင့်လိုးရင်သမီးရောဖေပါ ပြီးသွားကြလေ၏။
သားဖနှစ်အမောဖြေရင်း ဖေသမီး ဗိုက်ကြီးတော့မှာပဲဆိုပီးငိုလေ၏ မကြီးပါဘူးသမီးရယ်။ သမီးကိုဖေ ဆေးတိုက်ပါ့မယ်။ မငိုနဲ့တော့သမီး မေမေသိရင်လည်း သမီးကို သတ်တော့မှာလား မသိပါဘူး။ သမီးရဲ့ သမီး ဘယ်သူမှမပြောရင် မသိပါဘူး။ သမီး ဖေလေ သမီးအမေမလာခင် ဒီနေ့ည သမီးအတူအိပ်ချင်တယ်သမီး ဒီမယ်ဖေ သမီးစပတ်လဲကြည့်ပါအုန်း ကျယ်သွားလိုက်တာပီးတော့ ဖေနဲ့သမီး တစ်ခန်းထဲမှာအတူအိပ်တစ်ညလုံး လိုးနေရအောင် ဖေနဲ့သမီးက လင်မယားမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပီး ခုလိုလိုက်လျောလိုက်တာ ဒီအဖေလေးတစ်ယောက်ထဲရှိတာကြောင့်မို့ ဟိုဘက်အိမ်က ရွှေအိသော်ကို ချောင်းကြည့်နေတာ ဆိုတာလဲ သမီးသိတယ်။ မနေနိုင်လို့ စော်ကားမိရင် အဖေထောင်ကျမှာစိုးလို့ချစ်လို့ ခုလိုပေးလိုက်တာ။ ဒီလောက်နဲ့ပဲသမီးတော်ပြီ ထက်မမှားချင်ဘူး။
မနက်ဖြန် သမီးကိုယ်တိုင်မေမေကို သွားခေါ်ပေးမယ် အာ့ကျမှအမေကိုအားရအောင်လိုး သမီးက အဖေမယားမဟုတ်ဘူး တစ်ညလုံးအတူအိပ်လိုးနေရအောင် သမီးရယ်း ခုနကပဲ သမီးပဲကောင်းနေတာမိုလားငြီးတောင်နေသေးတယ်။ ဒါကတော့ဖေ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ ဆက်ဆံမှတော့ ဒီအရသာတော့ထွက်လာမှာပဲ။ ဒါကြောင့် ထက်မဖြစ်အောင်သမီးကပြောနေတာပါ။
သမီးဖြစ်သူရူပါကျော်လည်း ပြောပြောဆိုဆို အဝတ်စားဝတ် အခန်းထဲက ထွက်သွားလေတယ်။ ပီးတော့ ရေချိုးပီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ကို ထွက်လည်ပေမဲ့
မနက်က သူမကို အားရပါးရ စိတ်တိုင်းကျ ကောင်းအောင် လိုးပေးခဲ့တဲ့ သူမ အဖေဖြစ်သူရဲ့ ဆန္ဒကို မကောင်းတတ်၍သာ ငြင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ အခန်းထဲမှာ ချစ်ဖေဖေ ဘယ်လိုများ ကျန်ရစ်ခဲ့မလည်း စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ရူပါကျော် တစ်ယောက် မျက်ရည်တွေ ကျနေမိတယ်။ ဟဲ့ မိရူပါ အပျော်ထွက်ပါတယ်ဆိုမှ နင်က ဘာလိုငိုနေတာလည်း။ ဘာလဲ ရည်းစား က ပစ်သွားလို့လား ရည်းစားကပစ်လို့ ဟုတ်ပါဘူး။ ရည်းစားထက်သာတဲ့ သမီးအရင်းခေါက်ခေါက် ငါ့ကို ကြင်နာယုယစွာ တစ်ဖုန်းဖုန်းနဲ့ လိုးပေးတဲ့ ချစ်သူရည်းစားချစ်ဖေေဖေကြီးကို သနားလိုပါလို့စိတ်ထဲက ပြောနေမိတယ်။ ဟဲ့ မိရူပါ ဘာ စဉ်းစားနေတာလည်း ငါမေးတာကော ကြားရဲ့လား? ကြာပါတယ် မိသု ရယ် ရည်းကပစ်လို ဟုတ်ပါဘူးဟယ် မေမေကိုလွမ်းလိုပါ။ အေးပါအေးပါ နင် မနက်ဖြန်နင့်အမေဆီသွားမှာပဲ ငိုမနေနဲ့ လာကဲမယ်။ အေးပါ မိသုရယ် ထိုသို့ဖြင့် သမီးဖြစ်သူ ရူပါကျော်လည်း အိမ်ကိုပြန်ပီး ချစ်ဖေဖေကြီးကို မျက်နာမပြရဲတာကြောင့် မိသု အိမ်မှာပဲ အိပ်ပီး မနက် ရွှေတိမ်မိုး ကားနဲ့ပဲ ရန်ကုန် သူမ အမေဆီသို့ သွားလေ၏။ ငနောင် ငနောင်ရေ ဘယ်သူလဲဟေ့ နင့်မယား ထားမေဟေ့ အော်မိန်းမ ပါလား။ အေးဟေ့ နင့်သမီးပေါ့ ဖေဖေ က အိမ်မှာမေမေရှိမှ စားရသောက်ရတာအဆင်ပြေမှာမို့ သွားခေါ်ခိုင်းလို့ဆိုပြီး ငါ့ကို နင့်သမီးလာခေါ်တာဟေ့။ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ထားမေ နောက် ကပ်ရပ်ပါလာတဲ့ သမီးကို ကြည့်လိုက်တော့ ခေါင်းလေး ငုံ့နေတာပေါ့၊ ဦးရဲနောင်လည်း ဇနီးဖြစ်သူရှေ့ပဲ ဒါကြောင့် ဖေဖေက သမီးလေးကို ချစ်နေတာဆိုပီး ပါးနှစ်ဘက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်နမ်းလိုက်၏။ ဒေါ်ထားမေကတော့ သားဖအသိနဲ့ပြုံးနေပေမဲ့ ဦးရဲနောင်နဲ့သမီးဖြစ်သူကတော့ နမ်းတဲ့သူရော
အနမ်းခံရတဲ့သမီးရော စိတ်တွေက ရာဂ ကာမ အမှောင်ထဲ ပျော်မွှေ့ ကခုန် သွေးတွေစူနေတာပေါ့။ ကဲ ငနောင်ရေ သားဖသုံးယောက်ဆုံတုန်း အပြင်သွားကြမယ် အေး သွားတာပေါ့။ ထိုသို့နှင့် သားဖသုံးယောက် အပြင်က အပြန်မိုးချုပ်တော့ အဖေနဲ့အမေက အဖေအခန်းကို ဝင်သွားကြပီး သမီးဖြစ်သူ ကျမကတော့ ကိုယ့်အခန်းကို ဝင်လာခဲ့တယ်လေ ည ၈ နာရီထိ အိပ်လို့မပျော်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ သူမနဲ့ ဖေဖေ ဒီအခန်းထဲမှာပဲ လင်မယားလိုနေ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ဖေဖေရဲ့ အသားအရေနဲ့ မထိတဲ့နေရာမရှိလောက်ပါပဲ။ ရူပါကျော် စဉ်းစားတိုင်း အဲနေ့လေးကို ပြန်တမ်းတမိပြီး စပတ်မှ အလိုးခံချင်သော စောက်ခေါင်းထဲက စောက်ရည် ရေကြည်လေးတွေ ကျလိုနေတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဖေဖေနဲ့မေမေ အိပ်ခန်းဆီ သူမ အသာအယာ သွားပီးချောင်းကြည့်တော့ ဖေဖေက မေမေကိုး လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပီး ဆံပင်ကို လက်တစ်ဖတ်ကစွဲ လိုးနေလေ၏။ ကျမလေ မေမေ နေရာမှာ သူမသာဖြစ်လိုက်ရရင် နတ်ပြည်ပါပဲ ရူပါကျော် လည်း
စပတ်နီတာရဲလေးကို လက်ကလေးနဲ့ မွှေနှောက်ပီး စိတ်ကလည်း ဖေဖေ လိုးးးးလိုး အားဖေဖေချစ်ဖေ ဆိုပီး သူမ အာသာပြေသွားမှ အခန်းဆီပြန် အိပ်လေတော့သည်။ ထိုသို့နှင့် သမီးဖြစ်သူက ဖေဖေနဲ့မေမေ လိုးတာကို ချောင်းကြည့် အဖေကိုမှန်း အာသာဖြေလိုက်နဲ့ ၃လလောက်အကြာမှာ ဒေါ်ထားမေ တစ်ယောက် ကင်ဆာ ရောဂါဖြင့် ဆုံးပါးသွားလေ၏။
ဦးရဲနောင်လည်း ဇနီးဖြစ်သူ ရက်လည်ပီးတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သမီးလေးကို မှားခဲ့တာတွေက မှားခဲ့ပါပီ နောက်နောင် အဖေလေ သမီးကို ဖခင်စိတ်သန့်သန့်နဲ့ပဲ ပြုစုရှောက်သွားမယ်လို့ သမီးကို ဖေကတိပေးပါတယ်ကွယ်။ ပြီးတော့ ဖေဖေ သူငယ်ချင်းသားနဲ့သမီးကို ဖေဖေ လက်ထပ်ပေမယ်နော်။ ဟုတ် ဖေဖေ ဒါပေမဲ့ အချိန်တွေက နှောင်းခဲ့ပါပီ။ ဘဝကံကြမ္မာမုန်းတိုင်းရယ် ဦးရဲနောင်တို့သားဖဆီသို့ ဦးတည်၍လာလေပီ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်နေ့ သမီးဖြစ်သူ ဗိုက်အောင့်လို့ ဆေးခန်းပြလိုက်တော့ သမီးဖြစ်သူမှာ ကိုယ်ဝန် ၅ လရှိပြီး ဗိုက်မှာ ရွက်ပုံး ဗိုက်ဖြစ်၍ တစ်အားမထွက် ပဲ သိသာယုံလောက်သာ ထွက်တာလို့ ဆရာမ ပြောလိုက်တော့ ဦးရဲနောင် ခေါင်းမိုးကြိုးပစ်လိုခံစားလိုက်ရပီး အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ငိုနေသောသမီးကို ချော့မော့ကာ မငိုပါနဲ့ သမီးရယ်။ အလုံးစုံက ဖေဖေ အပြစ်တွေပါ သမီးကို ဆေးတိုက်ဖို့ မေ့သွားတာရယ်က နောက်ဆုံး ဖေဖေကိုပြောပီး၊ သမီးထွက်သွားလိုက်တာရယ် သမီးမေမေပြန်လာတော့ ပျော်နေလိုက်တာရယ် နောက်ပီး သမီးအမေနားရေးကိစ္စတွေကြောင့် ဖေဖေ မေ့သွားတာပါသမီးရယ်။ ဒါဆို ဘယ်လုပ်ကြမလဲဖေ၊ ဖေဖေပြောမယ်သမီး သမီးသာလက်ခံရင် ဖေဖေနဲ့သမီးဒီမှာရှိတဲ့ အိမ်ခြံမြေ တွေကိုရောင်းချပီး နယ်မြို့လေးမှာ ဖေဖေနဲ့သမီး လက်ထပ်ပီး အကြင်လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြမယ်လေ မိသားစုဘဝလေး တည်ထာင်ကြမယ်လေ၊ ဖေဖေအသတ်ကလဲ ခုမှ ၄၀ ပဲရှိပါသေးတယ်။ ဘာမှဖြစ်ပါဘူး ဖေ ကောင်းမယ် ထင်ရင် သမီးသဘောတူပါတယ်။ ထိုသို့ဖြင့် သားဖနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ကာ ရောင်းစရာရှိတာတွေ ရောင်းချပီး နယ်မြို့လေးသို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင် ကြတာပေါ့။ ခုဆိုရင် နယ်မြို့လေးမှာ သားဖနှစ်ယောက် အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကစ ပြောင်းပြီးခေါ်ကြတာပေါ့ မိန်းမ ရှင်ယောက်ျား မိန်းမက သားသားလေး လိုခြင်တာလား သမီးလေး လိုခြင်တာလား။ ဖေဖေတွက် အဲလေ မှားလို့ ယောက်ျားအတွက်ရည်မှန်းပီး သမီးလေးပဲလိုခြင်တာပေါ့။ တယ်တော်တဲ့ ငါ့မယားလေးပဲ ညကျမှ မိန်းမကို ယောက်ျား ကောင်းကောင်းကြီး ပြုစုပေးမယ်နော်။ ဟုတ်ပါပီယောက်ျားရယ် ခုတော့ အင်္ကျီတွေချွတ် သမီး အဲ့ မိန်းမ လျှော်ပေးမယ် ပီးရင် ရှင်လည်း အလုပ်သွားတော့ ဟုတ်ပါပီ ချစ်သောမယားလေးရယ်။
ထိုသို့ဖြင့် ယခင်က အဖေအရင်းဖြစ်သူ ဦးရဲနောင် ယခု ယောက်ျားဖြစ်သူ ဦးရဲနောင်လည်း အလုပ်က အပြန် မိန်းမရေ မိန်းမ ရူပါကျော်မိန်းမရေ ရှင် ယောက်ျား မိန်းမလာပါပီ။ ယောက်ျား ကိုကိုနောင် စောလှပါလား။ စောတယ် သမီး အဲ့ မိန်းမရေ ဪ ဒီ မယားအသစ်ကလေးကို လွမ်းလို့ ဆိုပီး နှခမ်းလေးကို
စုတ်ယူလိုက်တယ် သွား အပိုတွေ သမီးသမီး နဲ့လုပ်မနေနဲ့ လင်မယားတောင်ဖြစ်နေပီ ဒီမှာဖြင့် ရှင့် ရင်သွေလေး လွယ်ထားရတာ။ အေးပါ မိန်းမရယ် ကိုကိုနောင် ယောင်သွားလို့ပါ။ ရော့ ရေ သောက်လိုက်အုံး။ ဟာ ကောင်းတယ်မိန်းမ ယောက်ျားလဲ မောလာတာနဲ့အတော်ပဲ။ ချစ်မယားလေး စေတနာတွေကြောင့် ရင်ထဲအေးသွားတာပဲ။ ပြောပြောဆိုဆို ရေ ခွက်လေးအောက်ချပီး သမီးဖြစ်သူမယားလေးကို ကစ်ဆင်တွေပေး သမီးဖြစ်သူမယားလးကလဲ အဖေဖြစ်သူ လျှာလေး သူမ ပစက်ထဲအရောက် အငမ်းမရ စုတ်ယူနေမိတယ်။ ကဲ ယောက်ျားတော်ပီ၊ အိမ်ထဲမှာ မကောင်းဘူး။ အခန်းထဲသွားမယ် အခန်းထဲရောက်တော့ ဦးရဲနောင်လဲ ပုဆိုးတွေချွတ် ကိုယ်လုံးတည်းနဲ့ သမီးဖြစ်သူမယား ရူပါကျော်လည်း ကိုယ်လုံးတီးလေးနဲ့ပေါ့ ငါ့မိန်းမက ဗိုက်စူလေးနဲ့ဆိုတော့ အရမ်းဖီးလာတယ်
အာ့ ရှင်လုပ်တာလေ၊ ဟဲဟဲ သမီး ရှင်ဖေ ခုဆို သမီးနဲ့ဖေ ရှက်စရာမလိုတော့ဘူး။ လင်မယားတွေ ဆိုတော့ ဟုတ်ပါပီ ကိုနောင် ရယ် မိန်းမကို ကောင်းအောင် လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာလုပ်တော့ သမီးကလဲ အဲလိုပြောလိုက်တော့ နှခမ်းတွေစုပ် နို့တွေကိုင် တဖြေးဖြေး ဦးရဲနောင် ပါးစပ်က အောက်သို့ ဆင်းသွားပီး သမီးဖြစ်သူမယား စပတ် အစိလေးကိုလျှာနဲ့ထိုးမွှေတော့ ရူပါကျော် ခါးလေး ကော့ကော့ တက်သွားပီး အားးးးးအင်းးးးးအိုးးးး နဲ့မျက်လုံးမှေးဆင်းငြီးနေတာပေါ့ ဦးရဲနောင်လဲ စောက်စိကို မွှေပီးနောက် စောက်ခေါင်းလေး လျှာကိုပြောင်းထိုးစုတ်လိုက်တော့ သမီးဖြစ်သူ ရူပါကျော် အသံလေး ထွက်လာတယ်။ ကောင်းလိုက်တာ ယောက်ျားရယ် အားးးအင်းးး ယောက်ကျား မွှေ မွှေ အင်းးးးအိုးးး ကြွတ် ကြွတ် အရမ်းကောင်းတာပဲ ဖေဖေ ယောက်ျား ကိုနောင်ရယ်
ဦးရဲနောင်လဲ စပတ်က နေ နှခမ်းကိုပြောင်းနမ်းပီး လက်ခလယ်နဲ့ စပတ်ကို မရပ်မနား မွှေပေးတော့ မိန်းမဖြစ်သူ သမီးရူပါကျော် အကောင်းကြီးကောင်းကာ ပီးသွားလေတယ် မိန်းမ ပီးသွားပီလား အင်းပီးပြီ အာ့ဆို ယောက်ကျားကို ပြန်လုတ်ပေးအုံးဆိုပီး သမီးရှေ့ ဒူးထောက်ကာ သူ၏ တုတ်ခိုင်သောလီးကို
သမီးမယားလေး ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်တော့ မယားလေးကလဲ အားရပါးရစုပ် အားးးအိုးးး ကောင်းတယ်မိန်းမ ငါ့မိန်းမစုတ်စုတ် အာခေါင်ထဲထိ
လီးကိုဆောင့်ထိုးပီး ပစက်ကလည်း မိန်းမ သမီးမယားလေး ကောင်းလိုက် ချစ် သမီးမယားမိန်းမရယ် မိန်းမ ရှင် ယောက်ကျားလိုးတော့မယ်နော် ဟုတ် ဖေ ယောက်ျား မိန်းမကို မေမေလိုးသလိုလိုးပေးပါ၊ ဖေ သမီးက သိနေတယ်ပေါ့ သိတာပေါ့လို့ သမီးကချောင်းကြည့်ပီး ဟောဒီ ဖေဖေ ကိုနောင် ယောက်ျားကိုမှန်းပီ စောင်းတိုက်အာသာဖြေရတာ ခုတော့ တကယ်အလိုးခံရတော့မယ် ဆိုပီး လေးဘက် ကုန်းလိုက်ပီး လိုးတော့ယောက်ကျား ဆိုကာ လီးကို လက်နဲ့ကိုင်ပီး
သူမကိုယ်တိုင်တေ့ပေးလိုက်တော့ ဦးရဲနောင်လည်း အားပါးတရ အားသကုန် ဆောင့်လိုးတော့တာပဲ၊ အားးးးဖေးး ယောက်ျား လင်မယားတွေပဲ မညှာနဲ့
သမီး အား မိန်းမ စောက်ဖုတ် ကွဲပလေ့စေ လိုးပါ နာနာလေးလိုးပါ။ ဦးရဲနောင်လည်း တဘုန်းတဘုန်းနဲ့ အားသကုန်လိုးတော့တာပဲ ပြွတ် ပြွတ် ဘတ် ဘတ်
အားးးးအင်းးးးကောင်းလိုက်တာ ချစ်လိုက်တာယောက်ျားရယ် အလိုးကောင်းလိုက်တာ အားးးးကောင်းးးးအင်း ဘတ်ဘတ် နဲ့မီးကုရမ်းကုန်လိုးနေတာပေါ့ မိန်းမ ပက်လက်နေပေး လို့ပြောလိုက်တော့ သမီး ပေါင်ကို ပုခုံးမှာထန်းပီး လိုးတော့တာပေါ့။ ရူပါကျော်စပတ်လေးမှာလဲ အရည်တွေရွဲလိုနေတော့ အသံတွေ ဆူညံနေတာပေါ့ လိုး လိုးပါ ယောက်ျားဖေ လိုး သမီး အား မိန်းမ ပြီးခြင်ပီ ယောက်ကျားလဲပီးခြင်ပီ သမီးမိန်းမဆိုပီး အချက် ၂၀ လောက်ဆောင့် ပီး သမီးဖြစ်သူ စပတ်အတွင်း သားအိမ်ထဲ သို့ လီးရည်တွေ ပန်းထုတ်ရင်း ပြိုင်တူပီးသွားကြလေ၏။
သားဖလင်မယားနှစ်ယောက် အမောပြေတော့ မိန်းမ ရှင် ကောင်းလား အရမ်းကောင်းတာပဲ မိန်းမရယ် ခုန တအားလိုးလို့ ကိုယ်ဝန်မပျက်လောက်ပါဘူးနော် ဖေ မပျက်ပါဘူးမိန်းမရယ်။ မိန်းမ ရှင် အခြားယောက်ျားလေးတွေနဲ့ စကားပြောတာ ယောက်ျားမကြိုက်ဘူးနော်။ အင်းပါ ယောက်ကျားရဲ့ ယောက်ျား လဲ အခြားမိန်းမ တွေနဲ့ ပြောတာသမီးမကြိုက်ဘူးနော်၊ ဟုတ်ပါပီ မိန်းမရယ် လင်မယားနှစ်ယောက် ရေမိုချိုး ဆေးခန်းသွားကြတော့ အိမ်နီး နားချင်းတွေက ဒီလင်မယား ဘယ်သွားကြမလို့လဲ မေးရာ ဪ မိန်းမ ဗိုက်သွားပြမလို့ပါ အမရေ၊ အားကျတယ်ဟေ့ ဒီလင်မယား ကြည့်လိုက်တိုင်းပျော်ရွှင်နေတာပဲ။
ထိုသို့ဖြင့် ဦးရဲနောင် သမီးဖြစ်သူ မိန်းမလေးလဲ ၁၀ လထဲရောက်လို့ သမီးလေး မွေးတော့တာပေါ့ အဲ့သမီးလေးကော ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ .....။
အလုံးစုံသော် ( ပြီးပါပြီ)
မူရင်း ရေးသားသူ - Aung Lay